Lakkoofsota fuulaa - LibreOffice Help
Barreessaa keessatti, lakkoofsi fuulaa, dirree ati barruu kee keessaati saaguu dandeessudha.
1 Lakkoofsoota fuulaa Saaguu
2 Fuula lakkoofsaa hiikame waliin eegaluu
3 Haalata lakkoofsaa fuulaa dhangeessuu
4 Haalaawwan lakkoofsa fuulaa adda addaa fayyadamuu
4.1 Fuula tokkoffaadhaf haalataalee fuulaa adda addaa fayyadamuuf
4.2 Jijjirama haalataa fuulaa hujeekaan saagaman fayyadamuuf
Lakkoofsoota fuulaa Saaguu
Fuula lakkoofsaa iddoo qaree ammeeti saaguuf Saaguu - Dirreewwan - Lakkoofsa fuulaa fili.
Barruu "Page number" jedhu bakka lakkoofsaa yoo agarte, Mul'annoo - Dirree Maqaaleefili.
Haa ta'u malee, yommuu barruu dabaltuu ykn haqxuu dirreewwan kunnen iddoo jijjiiru. Kanaafuu fuula dirree lakkoofsaa mataduree ykn jaantoo keessaati kan iddoo walfakkaataa qabanii fi kan fuula kamiyyu irraati irra deebi'aman saaguun gaaridha.
Fuulota haalata fuula ammee hundatti irrantoo ykn jalaantoo dabaluuf, Saagi - Irrantoo - (maqaa haalata fuulaa) ykn Saagi - Jalaantoo - (maqaa haalata fuulaa) saaguu fili.
Fuula lakkoofsaa hiikame waliin eegaluu
Amma lakkoofsota fuulaa irraati to'aannaa dabalata barbaadda. Galmee barruu fuula 12 irraa eegalu irrati barreessaa jirta.
Galmee kee keessaati keeyyata tokkoffaa irratti cuqaasi
Dhangii - Keeyyata - Yaa'a Barruufili.
Iddoo qurxinsaa keessati, Saagii dandeessisi. Lakkoofsa fuulaa lakkoofsa haaraa akka qindeessu gochuuf Haalata Fuula Waliin danddeessisi. TOLEE cuqaasi.
lakkoofsi fuulaa haaraan amala fuula keeyyaata tokkoffaati.
Haalata lakkoofsaa fuulaa dhangeessuu
Lakkoofsota fuulaa Roomaa i, ii, iii, iv, fi k.k.f tarreeffaman barbaadda.
Dirree fuula lakkoofsaa dura sirriin yeroo lama cuqaasi. Qaaqa Dirreewwan Gulaala ni ilaalta.
Dhangii lakkoofsaa filuun TOLEE cuqaasi.
Haalaawwan lakkoofsa fuulaa adda addaa fayyadamuu
Fuuloota haalata lakkaawwii warra Roomaan barreefamani, kanneen hafan haalata birootin kan barreeffaman si barbaachiisa.
Barreessaa Keessatti, haalatawwan Fuula adda addaa si barbaachiisa. Haalatni fuula tokkoffaa jaalantoo lakkoofsota roomaniitif dirree fuula lakkoofsatin dhanga'ee of keessaa qaba. Haalatni fuulaa itti aanuu jaalantoo dirree fuula lakkoofsatin dhangeeffame of keessaa qaba.
Haalataaleen fuula lameenu qurxinsa fuulatin adda bahuu qabu. Barreessaa Keessatti, qurxisawwan fuulaa ofumaani fi qurxisawwan fuulaa hujekaan saagaman qabaachuu ni dandeessa.
qurxinsi fuulaa ofumaani yommuu haalatni fuulaa "akkaataa itti aanu" addummaa qabaate dhuma fuulaa irraati mul'ata.
qurxinsa fuula hujeekaan saagamee haalatawwan fuulaa jijjiirun ykn osoo hin jijjiirin fayyadamuun ni danda'ama.
Yoo Ctrl+Enter dhiibde, qurxiinsa fuulaa osoo haalatawwan hin jijjiirin fayyadamuu ni dandeessa.
Yoo Saagii - qurxiinsa hujeekaa filtee, qurxiinsa fuulaa osoo haalata hin jijjiirin ykn jijjiirun ykn fuula lakkoofsaa jijjiirun saaguun ni danda'ama.
Wanti gaarii jettu galmee kee irraati hunda'a: qurxiinsa fuulaa haalatawwan fuulaa jidduu hujeekaan saagaman fayyadamuuf, ykn ofiin jijjiiraa fayyadamuuf, fuula mata duree haalata fuuloota biroo irraa adda ta'e tokko yoo barbaadde, mala ofumaan fayyadamuu ni dandeessa.
Fuula tokkoffaadhaf haalataalee fuulaa adda addaa fayyadamuuf
Galmee kee keessaati fuula tokkoffaa irratti cuqaasi.
Dhangii - Akkaataawwanii fi Dhangeessuu filadhu.
Foddaa Haalataalee fi Dhangeessuu keessatti, sajooHaalatawwan fuula cuqaasi.
Haalata "First Page" yeroo lama cuqaasi.
Amma fuulli mata duree keetii haalata "First Page" qaba, akkasumas fuulootnii itti aanan ofumaan haalata "default" qabu.
Amma fakkeenyaaf, haalata fuulaa "Default" tiif qofa jalaantoo saaguu/galchuu ni dandeessa, ykn haalataalee fuula lachiifuu jkalaantoo saagi, garuu dirreewwan lakkoofsaa haala addaatin dhangeeffamaniin ta'u qaba.
Jijjirama haalataa fuulaa hujeekaan saagaman fayyadamuuf
Gubbaa fuula iddoo jalqabbii keeyyata iddoo haalatni fuulaa adda addaa itti fayyadamamee cuqaasi.
Saagii - qurxinsa hujeekaa fili. Qaaqa Qurxiinsa Saagii ilaalta.
Tarree sanduuqaa haalataa keessatti, haalata fuulaa fili. Fuula lakkoofsa haaraas qindeesuu dandeessa. TOLE cuqaasi.
Haalatni fuula filamee keeyyata ammee irraa eegalee hanga qurxinsa itti aanuti haalataan fayyadama. Haalata fuula jalqabaa haaraa uumuu danda'uu qabda.
Lakkoofsota Fuulaa Jalaantoo keessatti Saaguu
Fuulota Guutuu fi Mangoo irratti Akkaataa Fuula Garagaltuu
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.1/Writer/Page_Numbers/om&oldid=700743"
This page was last edited 07:11:59, 2014-02-20 by LibreOffice Help user WikiSysop.